Malunga Nathi-Chengdu Zhengheng Auto Parts Co., Ltd.
Siyinkampani eqhutywa ziimfuno zabathengi kwaye sizimisele ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ezilungiselelwe wonke umthengi.Namhlanje, njengomthengisi weenjini kunye neendawo ezinxulumene nazo, sithatha "iibhloko ze-injini ye-cylinder" njengeemveliso zethu eziphambili, kwaye sigxile "kwiintloko zesilinda, ii-caps ezithwele, imizimba yempompo yeoli, izindlu ze-gearbox, iindawo ze-chassis, iindawo ze-aluminium, njl. ."Ukubonelela ngenkxaso yombane ozinzileyo kunye nezisombululo ezicwangcisiweyo kubathengi behlabathi kwiinkalo ezininzi.
IZhengheng inemizi-mveliso emine eTshayina, iziko lovavanyo lwemathiriyeli kunye neziko loyilo, iziko lobugcisa lokuqala laseTshayina lazala iplasma yokutshiza, kunye neziko lokushicilela le-3D.Okwangoku, iye yaqulunqa kwaye yavelisa ngaphezulu kwe-150 iintlobo zeebhloko ze-injini yentsimbi kunye neentlobo ezingama-30 zeebhloko ze-injini ye-aluminium.Inani elipheleleyo leebhloko ze-cylinder ezithengiswayo lidlule i-20,000,000 kwi-2018. Inethiwekhi yayo yokuthengisa ihlanganise amaphondo angama-34 kunye nemimandla yaseChina, kunye namazwe aphesheya afana ne-United States, iJamani, iJapan, iSwitzerland, ne-Australia.
UZhengheng uneminyaka engaphezulu kwe-44 yamava okuvelisa atyebileyo kunye nembali yokusebenza.Imveliso nganye yamkela ngokungqongqo isiqinisekiso senkqubo yomgangatho we-IATF 16949 yamazwe ngamazwe, isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwendalo esingqongileyo ISO14001, isiqinisekiso senkqubo yolawulo lokhuseleko lwe-OHSAS18001 kunye nenkqubo yolawulo lwemveliso ye-TPS engqingqwa.Elona xesha likhawulezayo lokuhanjiswa kweprototype yalo lingacuthwa libe ziintsuku ezingama-25.
Ukusebenzisa inkqubo yolawulo yeToyota TPS
Ngo-2006, yaphumelela uphicotho lweGM-QSB
Ngo-2015,ulupasisile uphicotho lwe-EHS lweGE
Kwi-2016, ukuphunyezwa kwenkqubo yokulawula i-Changan QCA
Ngo-2017, sungula kwaye usebenzise inkqubo yokulawula i-ZHQMS
Iqela leR&D eligqwesileyo
UZhengheng ugxile ekwenzeni iibhlokhi ze-injini ngokwezifiso kunye neendlela ezahlukeneyo zokusahlela.
Ukusuka kwimizobo ukuya kwiisampulu ezigqityiweyo, ibhetshi yokuqala yeesampulu inokuhanjiswa kwiintsuku ezingama-55.
UZhengheng unemveliso ephucukileyo kunye nobuchule bokuhlanganisa ubuchwephesha, ufaka ipropathi yobukrelekrele bonke abasebenzi kuphuhliso nophuculo lwemveliso, kwaye usebenzisana neeyunivesithi ezaziwayo-kakuhle zasekhaya ezifana neYunivesithi yaseSichuan kunye neYunivesithi yaseKunming yeSayensi nobuChwepheshe ukuseka iFoundry Research Institute, iThermal Spray Research Institute. , kunye namaziko ophando lwe-Intelligent Manufacturing, njl., ezinceda uZhengheng ukuba aqhubeke nokuphuhlisa.
Sinabasebenzi abali-1,500, kuquka ubunjineli kunye nabasebenzi bobugcisa, iinjineli eziphezulu kunye nabahlohli abavela eJapan, eJamani, naseOstriya.Oku akuqinisekisi kuphela umgangatho wokuqala weemveliso zeZhengheng, kodwa kukwavumela iimveliso zikaZhengheng ukuba zaphule isiko kwaye zibhukuqe i-Innovation.
Njengomthengisi weemveliso ezixhasayo kwishishini, uZhengheng unenzuzo yexesha elide kunye nozinzo lokukhuphisana.Inika iziqinisekiso ezivela kulwazi kunye namava, ukhuseleko kunye nokuzinza, iimveliso ezikumgangatho ophezulu, kunye nezicelo zeplatform ezininzi.Iimveliso zethu ziye zaba yiToyota, GM, Hyundai, SAIC, ababoneleli abafanelekileyo beenkampani ezinkulu zokwenza iimoto ezifana neGreat Wall, Changan, Geely, njl.
Iworkshop yemveliso yokufa
•26 iiseti die ukuphosa izixhobo ukusuka 200 ukuya 6000 iitoni;
•Imveliso yonyaka ngaphezulu kwe-10,000 yeetoni
•Ubonelelo lwemathiriyeli ekrwada yobuqu bokuqinisekisa umgangatho weemveliso ukusuka kumthombo
•I-100,000 yeetoni / ngonyaka, kubandakanywa iibhloko ze-cylinder kunye ne-castings encinci
•7 imigca yokuvelisa
•Ukuphoswa kwentsimbi engwevu, ukuphoswa kwentsimbi ye-ductile kunye ne-vermicular cast iron castings
•Inkqubo yokunyanga isanti ebuyiselwe kubushushu iyaqaphela ukurisayikilishwa kwesanti
•Imigca yemveliso eyi-16, iziko le-2 lophuhliso
•Umthamo wonyaka wemveliso ye-1000,000 yeebhloko ze-cylinder kunye ne-2 yezigidi zezinye iimveliso zokusetyenzwa kwamandla